Asa sosialin’ny minisiteran’ny Mponina : Olona 834 000 mahery nahazo tombontsoa -
AccueilSosialyAsa sosialin’ny minisiteran’ny Mponina : Olona 834 000 mahery nahazo tombontsoa
Asa sosialin’ny minisiteran’ny Mponina : Olona 834 000 mahery nahazo tombontsoa
19/12/2017 admintriatra Sosialy 0
Ankoatra ny asa avotra mirindra,dia isan’ny nibahan-toerana teo amin’ny asa sosialy sy ny fiahiana ireo mponina marefo nataon’ny minisiteran’ny Mponina tamin’ity taona ity, ny fanampiana ireo mponina any amin’ny faritra Atsimon’ny Nosy, noho ny haintany nahazo azy ireo, vokatry ny tranga El Nino.
Nampitontongana ny toe-karena teo amin’ireo tokantrano tena marefo tany amin’ny faritra Atsimon’ny Nosy iny ny fiovaovan’ny toetr’andro nateraky ny tranga El nino. Nanimba ireo zaza efa miaina ao anatin’ny fotoan-tsarotra tao anatin’ny fotoana fohy izany, izay miteraka trangan’ny herisetra sy fanararaotana azy ireo. Ao anatin’ny fankalazana ny iray volan’ny ankizy hatrany, izay notanterahina tany Ambavombe sy Amboasary, no nampahafantarana tamin’ny fomba ofisialy ny “Vatsy Fiarovagnajaja”, izay karakarain’ny minisiteran’ny Mponina, fiarovana ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy (MPPSPF), eo ambany fanohanan’ny Unicef, izay fiaraha-miasa miaraka amin’ny talem-paritry ny tanora sy ny fanabeazam-pirenena, ny Bngrc, ny Fondation Telma ary ny fikambanana fiarahamonim-pirenena isan-karazany. Izay fandaharan’asa vaovao ny governemanta entina mampivondrona ny asa atao amin’ny famindrana vola tsy misy fepetra, momba ny famakiana teny sy manoratra, ny fahaiza-manao eo amin’ny fiainana ary ny fampiofanana arak’asa, ka ireo tokantrano manana adolatsento 10 hatramin’ny 18 taona niharan’ny fanararaotana, ireo adolatsento lohan’ny fianakaviana, ireo ankizivavy reny, ary ireo zaza tsy misy mpiahy ao anatin’ny kaominina Ambovombe, Tsihombe ary Beloha ao anatin’ny faritra Androy sy ao anatin’ny kaominina Amboasary ao amin’ny faritra Anosy no nokendrena. Izany dia natao mba ahafahan’ny fiarahamonina miaro tontolo iainan’ny ankizy. Adolatsento 10 hatramin’ny 18 taona miisa 562, izay niharan’ny fanararaotana ara-nofo na fanararaotana ara-toe-karena, ireo adolatsento lohan’ny fianakaviana, fa indrindra indrindra ireo ankizivavy reny, ary ireo zaza tsy misy mpiahy no nahazo tombontsoa tamin’ny famindram-bola eo noho eo nitentina 30 000 Ariary isan-tokantrano isam-bolana.
Ho fiatrehana ny haintany mahazo ny faritra Atsimon’ny Nosy, iny ihany koa, ny governemanta malagasy, miara-miasa amin’ireo mpiara-miombon’antoka maro ho an’ny fampandrosoana toa ny Banky iraisam-pirenena, ny Pam, Unicef dia nametraka fandaharan’asa fanampiana ara-bola ho an’olona miisa 830 000 eny anivon’ireo distrika tena marefo tao anatin’ny tetikasa Vatsin’ankohonana Fiavota. Fandaharan’asa tafiditra ao anatin’ny drafitra nasionaly vonjimaika hiadiana amin’ny haintany sy ny fandaharan’asa ho fampandrosoana, ary ny fiahiana ara-tsosialy hatramin’ny 2020. Ny tanjon’ny tetikasa dia fanampiana ireo fianakaviana sy mponina marefo voakasiky ny haintany tao anatin’ny faritra Androy sy Anosy amin’ny filana andavanandro. Ny volana desambra 2016 no efa nanomboka ny tetik’asa Vatsin’ankohonana Fiavota izay haharitra 3 taona, ary vola mitentina 35 tapitrisa Dolara no natolotry ny Banky iraisam-pirenena tamin’izany. Tokantrano 45 000 no efa nisitraka ny tetikasa nanomboka ny volana desambra hatramin’ny mey 2017, izay nahazo 60 000 Ariary isam-bolana.
Nanomboka ny volana jona kosa indray, dia mbola nahazo 30 000 Ariary isam-bolana sy tahirim-bola fanarenana mitentina 180 000 Ariary ireo tokantrano ireo, ka naloa indroa na intelo izany mba ahafahan’ireo tokantrano ireo manarina ny famokarana sy miatrika ny mety ho fiantraikan’ny haintany hatramin’ny volana septambra teo. Tsy nijanona hatreo fa mbola hitohy izany amin’ny taona faharoa (2017-2018), ka tokantrano 65 000 no hisitraka ny fandaharan’asa , ary mbola ireo ao anatin’io tokantrano 45 000 teo aloha no hisitraka izany. Fa amin’ity indray mitoraka ity atao amin’ny alalan’ny fandefasana ankizy any an-tsekoly ny fanampiana ara-bola. Marihina fa ny fanampiana ara-bola dia alefa amin’ny alalan’ny “mobile money” ka ny renim-pianakaviana no mandray azy.
Tokantrano 1 500 isa nozaraina sakafo
Mbola tany amin’ny faritra Atsimo Andrefana ihany. Tokantrano 1 500 isa no nozaraina sakafo, vokatry ny tranga El Nino. Tena mbola mamely fatratra ny mponina any amin’ny kaominina maro ao anatin’ny distrikan’i Toliara II, Ampanihy ary Betioky ny haintany. Satria na dia nisesy aza ny rotsak’orana teo tamin’ny faritra maro manerana an’i Madagasikara, ary niteraka tondra-drano mihitsy izany tany amin’ny toerana sasantsasany, ny telo volana voalohany tamin’ity taona ity dia tsy mba nisitraka izany ny faritra Atsimo Andrefana. Ny tena olana, ny taom-pambolena 2016-2017 any an-toerana dia mifandraika amin’ny fotoanan’ ny haintany hatrany efa efatra taona mifanesy izay. Vokany, niaina tao anatin’ny krizy mafy ary tandindomin-doza ny tsy fanjarian-tsakafon’ ireo mponina any an-toerana. Noho izany, nidina tany an-toerana ny ekipan’ny minisiteran’ny Mponina, fiahiana ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy, notarihin’ny minisitry Onitiana Realy, nizara sakafo ho an’ireo mponina tena sahirana. Sakafo miankina amin’ny vokatra misy any an-toerana , ary niankina ihany koa amin’ny fangatahan’ireo mponina, toa ny katsaka milanja 7,5 taonina, voanemba 3 taonina izay foto-sakafo any amin’izy ireo, ary koba Aina 4,5 taonina nozaraina ho an’ny tokantrano miisa 1 500 tao amin’ny kaominina Beheloka ao anatin’ny distrikan’i Toliara II. Ankoatra ny sakafo, dia nisy ihany koa ny fanomezana fitaovana natokana ho an’ny fikambanam-behivavy ho an’ireo manao asa miteraka fidiram-bola. Toa ny harato, masinina fanjairana, vilany.
Nitsidika ny faritra Sava ihany koa
Fa ankoatra ny tany Atsimon’ny Nosy, dia nahazo ny anjara birikiny ihany koa iny tapany Avaratra iny. Nidina tany amin’ny faritra Sava ny minisitra Onitiana Realy, taorian’ny fandalovan’ny rivodoza Enawo, ho famerenana amin’ny laoniny ny fiainan’ny mponina. Tanjona ny nanafainganana ny fiverenana amin’ny laoniny ny andavanandron’ny mponina tany an-toerana, sy fanatontosana ny fangatahan’izy ireo. Nisy ny fametrahana asa mivaingana maro nataon’ny minisiteran’ny Mponina, tamin’izany fotoana izany, ka isan’izany ny asa tanamaro, ary olona 2000 isa no nahazo tombontsoa tao Ambinanifao sy Ampahana. Niasa isan’andro nandritra ny 5 andro , ary tao anatin’ny 5ora amin’ny sandany 5000 Ariary ireo mpahazo tombontsoa. Ankoatra ny asa fanadiovana, dia mpianatra amin’ny ambaratonga voalohany miisa 160 notolorana fitaovam-pianarana ao amin’ny kaominina Tanandava, tao Andapa, izay fiaraha-miasa amin’ny Unicef. Nisy koa ny fanomezana milina fanjairana izay mitentina 2 tapitrisa Ariary, vilany ary fitaovana an-dakozia ho an’ireo fikambanam-behivavy tao Ambinanifao entina hanokafana toeram-pivarotana. Tanjona goavana ny fanamafisana ny fahafahan’ny tokantrano tena marefo mitsangana haingana taorian’iny fandalovan’ny rivodoza Enawo iny sy ihany koa mba hanafainganana ny fiverenan’ny andavanandron’ireo mponina amin’ny laoniny sy tsaratsara kokoa amin’ny alalan’ny AGR (Activités génératrices des revenus).